ခွာစုံပါသော တိရစ္ဆာန်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
ခွာစုံပါသော တိရစ္ဆာန်များ (အင်္ဂလိပ်: Even-Toed Ungulates) ဆိုသည်မှာ ခွာပါသော တိရစ္ဆာန်များထဲတွင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အား ၎င်းတို့တွင်ပါရှိသော ခြေချောင်းငါးခုမှ (စုံဂဏန်း)နှစ်ခုပေါ်တွင်သာ (အထူးသဖြင့် တတိယနှင့် စတုတ္ထခြေချောင်းနှစ်ခု) မျှခြေဖြစ်အောင်ထမ်းထားသော တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို ခြုံငုံခေါ်ဆိုသောအမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားမှုအရလည်း မျိုးစဉ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတိရစ္ဆာန်များအုပ်စု၏ သိပ္ပံအမည်ဖြစ်သော "အာတီယိုဒက်တိုင်လာ (Artiodactyla)" ဆိုသည့် စကားလုံးသည် ရှေးဟောင်းဂရိဘာသာမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ (အာတီယိုဒက်တိုင်လာ /ˌɑːrtioʊˈdæktɪlə/။ ရှေးဂရိ: ἄρτιος, romanized: အာတီယို, lit. 'စုံ(ဂဏန်း)'၊ ရှေးဂရိ: δάκτυλος, romanized: ဒက်တိုင်လာ, lit. 'လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်း') ဟူ၍ မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရလေသည်။ ဤအုပ်စုဝင် တိရစ္ဆာန်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထမ်းထားခြင်း မရှိသော ကျန်ခြေချောင်းသုံးချောင်းမှာ အချို့၌လည်း ပါရှိကြပြီး၊ အချို့၌ ပါဝင်ကြခြင်းမရှိပေ၊ အချို့မှာမူ ပါသည်ဟု ပြောနိုင်ရုံသက်သက်မျှသာ ပါရှိပြီး အချို့တွင် ပါရှိသည့် ခြေချောင်း/ လက်ချောင်းများမှာ အနောက်သို့ ဦးလှည့်နေကြလေ၏။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၎င်းအုပ်စုနှင့် မျိုးစဉ်အဆင့်ပြိုင် ဖြစ်သော ခွာမစုံသော တိရစ္ဆာန်များ(မ-ဂဏန်း) တွင်မူ ခြေချောင်းငါးခုတွင် မ-ဂဏန်း အရေအတွက်ပေါ်၌သာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထမ်းထားကြလေသည်။ ထို မျိုးစဉ်အဆင့်တူအုပ်စုနှစ်ခု၏ မတူညီသည့် နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ (ချွင်းချက် - ဝက်မျိုးနွယ်မပါ) ခွာစုံပါသော တိရစ္ဆာန်များသည် အပင် ဆဲလျူလို့အား ချေဖျက်ရာတွင် ၎င်းတို့၌ပါရှိသော တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်မကသော အစာအိမ်ဖြင့် ချေဖျက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ခွာမစုံသော တိရစ္ဆာန်များမှာမူ အူလမ်းကြောင်းအတွင်း၌ ချေဖျက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ထိုအစာချေခြင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်အား စားမြုံ့ပြန်ခြင်းဟု ခေါ်လေသည်။
ရေနေ-နို့တိုက်သတ္တဝါ ခွာစုံပါ တိရစ္ဆာန်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ရေနေ-နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်ကြသော ဝေလငါး၊ လင်းပိုင်နှင့် ရေဝက်နွယ်ဝင် စသည့် တိရစ္ဆာန်များသည်လည်း ခွာစုံပါ တိရစ္ဆာန်များမှ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ခေတ်သစ် ဇီဝမျိုးခွဲပညာရှင်များသည် ၎င်းအုပ်စုနှစ်ခုအားပေါင်း၍ “ဆတ္တာတီယိုဒက်တိုင်လာ (Cetartiodactyla , /sɪˌtɑːrtioʊˈdæktɪlə/)” ဟူသော အမည်ဖြင့်လည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြလေသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ကုန်းပေါ်နေထိုင်ပေါ်မူတည်၍ ခွာစုံပါ တိရစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၇၀ ခန့်ရှိလေသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ လူသိများသော အုပ်စုဝင်တိရစ္ဆာန်အချို့မှာ ဝက်များ၊ ရေမြင်းများ၊ အန်တဲလုပ်များ ၊ သမင်များ၊ သစ်ကုလားအုတ်များ၊ ကုလားအုတ်များ၊ လာမာကုလားအုတ်များ၊ အယ်လ်ပါကာကုလားအုတ်များ၊ သိုးများ၊ ဆိတ်များနှင့် နွားများ ဖြစ်သည်။
ဤအုပ်စုဝင် တိရစ္ဆာန်အများစုမှာ လူသားများအတွက် အစားအစာအရသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအရသော်လည်းကောင်း လွန်စွာအရေးပါကြလေသည်။
↑ "Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochromeband 12S rRNA mitochondrial sequences" (1997). Molecular Biology and Evolution 14 (5): 550–559. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025792. PMID 9159933.
↑ "Relationships of Cetacea (Artiodactyla) Among Mammals: Increased Taxon Sampling Alters Interpretations of Key Fossils and Character Evolution" (2009). PLOS ONE4(9): e7062. doi:10.1371/journal.pone.0007062. PMID 19774069. Bibcode: 2009PLoSO...4.7062S.
↑ Groves၊ Colin P.; Grubb၊ Peter (2011)။ Ungulate Taxonomy။ Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press။ p. 25။ ISBN 978-1-4214-0093-8။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခွာစုံပါသော_တိရစ္ဆာန်များ&oldid=735040" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၂၀:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။